PSJTV | ए ! सरकार कलाकारलाई तक्मा होईन, कालिकोटमा नुन देउ ! – गीतकार शिव पलाँस
सोमबार, १६ फागुन २०७३ पिएसजे न्युज
आधुनिक गीति लेखनमा शिव पलाँस कुनै नौलो नाम होइन । राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा उनका सयौं लेख रचना प्रकाशित छन् । माया गर्नुको अर्थ, बेहोशि मै छाडी गयौ, गन्दै जाँदा पिरतीमा, हिमाल पहाड मधेस... जस्ता गीतहरुले उनलाई गहन ढंगका स्रष्टा भनेर चिनाउछ । हाल अमेरिकाको सिकागोमा बसेर पनि साहित्य साधनामा उत्तिकै क्रियाशिल छन् शिव पलाँस । “नझरेका आँशुहरु” आधुनिक गीति संग्रह तयारी गरेका पलाँससँग पर्ल स्ट्रीट जर्नलको लागि प्रकाश अधिकारीले गरेको प्रस्तुत छ सिधा वार्तालापको सारसंक्षेप ।
प्रश्नः आराम हुनहुन्छ दाई ?
उत्तरः आराम हुनैपर्छ भाई । नत्र प्रवासमा जिन्दगी चल्दैन ।
प्रश्नः कसरी बित्दैछन् आजकल दिनहरु?
उत्तरः उहि दालभातको जोहो गर्न दौडिराछु ।
प्रश्नः हैन हैन साहित्य कर्म कस्तो चल्दै छ भनेको ?
उत्तरः यहाँ नेपाली पुस्तक पाईदैन । अनलाइनमा पढेको सानोतिनो सामाग्रीले अध्ययनको भोक मेटिदैन । गीतिलेखन चाहिँ कछुवा गतिमा चल्दैछ ।
प्रश्नः दौड त अन्तिममा कछुवाले जित्छ नि दाई ?
उत्तरः हैन त्यो त पुरानो लोक कथाको कुरा हो । आजकल त खरायोले नै जित्छ ।
प्रश्नः किन प्रेम बियोगका मात्र गीत लेख्नु हुन्छ ? जिन्दगीमा खतरा ट्रेजिडी परेको हो र ?
उत्तरः प्रेम बियोगका गीत बढि रुचाइएका मात्र हुन । संयोगान्त गीत पनि रेर्कड भएका छन् । सबै विषयबस्तुमा गीतहरु लेखिरहेको छु ।
प्रश्नः तत्कालै नयाँ पुस्तक वा एल्बम केहि आउदै छन् कि ?
उत्तरः “नझरेका आँशुहरु” नामको आधुनिक गीति संग्रह तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालका ख्यातिप्राप्त गायक, संगितकारहरुसगँ सहकार्य गरेको छु । सुनको जलप लगाएको, तिमीलाई पोल्ने चिन्ता लाग्छ, चल्नलाई त चलेकै छ लगायतका गीतहरु रेर्कडिङ भइसकेका छन् । त्यसपछि पुस्तक निकाल्ने सोचाई छ ।
प्रश्नः राज्यले कलाकारलाई बिभेद गरे कै हो ?
उत्तरः सौखले लागेको काममा राज्यबाट धेरै अपेक्षा गर्न हुदैन । राज्यको दायित्व कलाकारलाई तक्मा दिनु भन्दा पहिले कालिकोटमा नुन दिनु हो । बाँकी तपशिलका कुरा हुन् ।
प्रश्नः नेपाली संगीत बजार पाइरेसीले खायो भन्छन् नि ?
उत्तरः पाइरेसीले भन्दा पनि धेरै हल्लाले खायो । पाइरेसिले गर्दा कुन कलाकारको जहाज डुब्यो र कुन पाइरेसी कर्ता कुबेर भयो ल भन्नुस? म्युजिक कम्पनिले अलि बढि रोयल्टी खाएर कलाकारलाई अलि कम दिएको चाँही साँचो हो । समग्रमा हाम्रो संगीत उद्योग नै सानो हो ।
प्रश्नः धेरै मान्छेले तँपाईलाई घमण्डी भन्छन् नि ?
उत्तरः धेरैले होईन थोरैले भन्छन् । त्यो पनि स्वाभिमान र अभिमानको अर्थ नबुझेर होला ।
प्रश्नः अमेरिका बसेर नेपालको राजनीतिलाई गालि गरिराख्नु हुन्छ त ?
उत्तरः घर गएकी छोरीलाई पनि त माइतिको चिन्ता लाग्छ नि । नेपाल मै हुँदा पनि राजनीतिको बेथितिको बारेमा उत्तिकै लेख्ने बोल्ने गर्थे ।
प्रश्नः नेपाल कहिले फर्कने योजना छ ?
उत्तरः संभवत अर्को बर्षतिर फर्किन्छु कि !
तपाईको बाँकी साहित्यिक तथा सांगीतिक जीवनको शभकामना छ ।
हवस् धन्यवाद ।
ताप्लेजुङ : पाथीभरा क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको प्रायः उडान प्रतिकूल मौसममा हुने गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत धेरैजसो उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पदमा रहेकै बेला पाथीभरा पुग्ने र प्रतिकूल मौसमबीच मन्दिर दर्शन गरेर र्फकने ...
मकवानपुर: विकट गाउँबस्तीमा रहेका चेपाङ समुदायको गरिबी र निरक्षरताको वृत्तचित्र देखाएर विद्यालय निर्माण गर्ने भन्दै जर्मन नागरिकबाट उठाउन सुरु करोडौं रुपैयाँको खर्च सुरुवातमै दुरुपयोग भएको थाहा पाएपछि स्वयं जर्मन दाताले सम्बद्ध ...